> Resource> DVD> Download kasị DVD burner maka Win / Mac
M a na-eji Windows DVD onye na reeeeaallllyyyy ngwa ngwa bụ n'ebe ọ bụla ọkacha mma mmemme na-ngwa ngwa karịa windows DVD onye?
Dị ka n'elu onye, ​​ị nwekwara ike na-nsogbu na mgbakasị site eju-ọsọ gị DVD burner, ọ ga-abụ Windows DVD onye ma ọ bụ Mac iDVD. Yeah, na-eche ọtụtụ ma ọ bụ ọbụna ruo 10 awa na-eche na-ere ọkụ a DVD video ma ọ bụ DVD disk bụ ụdị ndụ egbu egbu. Luckily, na Wondershare DVD Onye Okike (DVD Creator for Mac), ị nwere ike ịzọpụta oge dị ukwuu site ugbu a. Ọ bụ ndị kasị DVD Onye Okike nke a na-sikwuo na ma CPU na GPU, na kachasị maka hyper threading na elu spec processors. Jiri ya tụnyere ndị ọzọ yiri omume kụrụ na ahịa, Ọ na atụmatụ siri ike ọrụ na elu arụmọrụ. Agbanyeghị, na anya ekwe. Ugbu a free download ya ikpe mbipute na-enweta ibu ngwa-ngwa ọkụ ọsọ ugbu a.
Cheta na: Na ndị na-esonụ ndu, Aga m na-Windows version dị ka ihe atụ. The faestest DVD Onye Okike maka Mac-eso otu atụmatụ, na i nwere ike ọkụ vidiyo na DVD na Mac na yiri nzọụkwụ.
1 Ibu Ibu media faịlụ n'ime ndị kasị DVD Ntụgharị
The ngwa ngwa DVD buring software na-atụmatụ nkecha na kensinammuo interface. Mbubata gị isi iyi videos, foto ma ọ bụ slideshows, dị nnọọ pịa "Import" button na-agagharị na gị faịlụ foder ma ọ bụ nanị ịdọrọ media faịlụ ka ya interface.
Mgbe ị na Ibu Ibu niile faịlụ, ha ga-ga-egosi na n'aka ekpe ka thumbnails. Ugboro abụọ pịa ya, ị nwere ike ịhụchalụ ha na nri ihuenyo.
2 Dezie faịlụ ma na-etinye a DVD menu (nhọrọ)
Ndị kasị DVD eke software na-enyere gị aka ngwa ngwa na conveniently ahaziri gị videos. Pịa pensụl na akara ngosi n'akụkụ ọ bụla video aha, a edit window ga-egosi n'elu. Ebe a, ị nwere ike ime ihe nile nkịtị edits dị ka n'ịgbanwe ìhè, iche, n'usoro n'usoro 90 degrees, cropping na nwa mmanya, wdg
Maka foto, ị nwekwara ike ịtọ ikwu n'ụzọ, n'okirikiri na ihe oyiyi na-eme ka ọ na ihe ahaziri na ihe bara uru.
3 Preview na-amalite ọkụ
Jide n'aka niile na-aga dị ka ị na-amasị site na ịpị "Preview" bọtịnụ ego gị DVD nkiri. Ọ bụrụ na ok, dị nnọọ fanye a ide DVD diski dị ka D9 ma ọ bụ D5 dị ka gị ọdịnaya na pịa "Ọkụ".
Atụmatụ maka ọkụ DVD na ultrafast ọsọ:
1. Ke ala nke omume window, ị nwere ike họrọ mmepụta DVD mma. N'ozuzu, ọkọlọtọ nhọrọ họrọ bụ na ndabara. Ọ bụrụ na gị mbụ faịlụ a bụ na elu àgwà, ma ọ bụ na ị chọrọ mma ya ọkụ àgwà, ị nwekwara ike họrọ "High Quality" nhọrọ. Ma biko buru n'uche na-ere ọkụ na-agba ga-aba karịa ọkọlọtọ otu.
2. Ọ bụrụ na i nwere otutu faịlụ ka ọkụ, na ị na-atụ aro ka a kwesịrị ekwesị menu n'ihi na gị DVD video. Ndị kasị DVD Creator enye n'elu 90 teamplates n'ihi na ị na bulie na n'ihu hazie ya. Ka malitere, dị nnọọ pịa "NchNhr" taabụ n'elu nke usoro ihe omume window, ma na-etinye ọkacha mmasị gị ịke. N'ezie, "Ọ dịghị menu" bụ dịnụ.
Ọ bụ ikenyeneke mbiet mfe na ngwa ngwa iji na-eme ka DVD format si gị mgbasa ozi faịlụ, nri? Gbalịa ugbu a!
Olee otú iji tọghata Video_TS ka DVD
Olee otú ọkụ a DVD enweghị iDVD maka Mac
Top 10 Zumba Fitness DVD maka Beginners
Windows DVD Onye kere Ga-Ọkụ MKV? Ngwọta
Free DVD Onye kere Software Ọkụ DVD na NchNhr
Olee otú iji tọghata uTorrent Movies ka DVD Format (Windows 10 gụnyere)